Maxay tahay sababta ka dambayso in aanan wax dacwad ah lagu soo oogi doonin taliyeyaasha ciidamada Masar? - BBC News Somali
Ugu yaraan 900 qof ayaa ku dhintay fagarayaasha Raabic Al-Caddawi iyo Nahdha 14-kii bishii Agosto sannadkii 2013-kii
Baarlamaanka dalka Masar ayaa meel mariyay sharci ka hor istaagaya taliyeyaasha sare ee militariga dalkaasi in loo maxkamadeeyo dambiyadii la gaystay xilligii howlgalkii dhimashada lahaa uu dhacay oo lagu afgembiyay madaxweyne Maxamed Mursi.
Sharcigan ayaa madaxweyanaha talada haya ee Masar Cabdi Fataax Al-Sisi u o ogolanaya inuu soo magacaabi karo saraakiisha aanan wax baaritaanno ah lagu qaadi doonin oo laga hor istaagaya in wax dambi ah lagu soo oogo.
Sharcigan wuxuu sidoo kale ka dhigaya in taliyeyaasha sare aanan loo maxkamadaynin dambiyadii la gaystay intii u dhexeeysay bishii July sannadkii 2013-kii iyo bishii June sannadkii 2014-kii. waxaana la rumaysan yahay in dibadbaxyada lagu dilay in ka badan 1,000 qof.
Waxaana howlgalkaasi lagu xiray 16,000 ilaa 41,000 qof halka boqolaal qofna lagu riday xukun dil ah.
Dadkan intooda badan waxay ahaayeen tageerayaasha madaxweyne Maxamed Mursi.
Sharciga ay ansiyeen baarlamaanka Masar wuxuu awood u siinaya taliyeyaasha militariga inay ay sii hayi karaan xilka muddo dheer.
Taliyeyaasha militariga Masar ayaa heli doona fursdaha ay helaan wasiirada dowladda oo ay kamid tahay helitaanka baasaboorada caalamiga ah marka ay u safrayaan dibadda.
14-kii bishii Agosto sannadkii 2013-kii, booliska iyo militariga Masar waxay xoog ku galeen fagaaraha Rabac Al-Cadawiya iyo Nahdha oo ay ku dibadbaxyeen kumanaan kamid ah taagerayaasha Maxamed Mursi halkaaso ay ku dhinteen ugu yaraan 900 qof.
Waxaana lagu tilmaamay dhacdadii ugu dhiigga badnayd taariikhdan casriga ah ee dalka Masar laga gaysto.
Haweeney isku dayayso inay hor istaagto mid kamid ah taangiyada militariga dagaalka sii ay u difaacdo canug dhaawac ah oo goobta yaalla.
Guddi dowladda Masar ay u xil saartay inay baaritaanno ku sameeyaan dilalka, ma aysan ku talo bixinin wax dacwad ah oo lagu soo oogaya xubno ka tirsan dowladda iyo militariga.
Balse ha'yadda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dilalka ay ka qayb yihiin siyaasad ay ciidamada kaga soo horjeedeen tageerayaal aanan hubaysnayn.
Camr Majddi ah khaabiir dhanka arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in sharciga ay ansixiyeen xubnaha baarlamaanka Masar uu muujinaya mid difaacaya taliyeyaashii dambiga gaystay.
Wuxuu yiri " inkastoo hadda ay awood leeyihiin, haddana ay ogyihiin baaxadda uu gaarsiisan yahay dambiga ay gaysteen, wakhtiga ayaa isbaddali doona markaaso oo caddaalad la horkeeni shakhsiyaadkaasi"
Hay'adda Human Right Watch waxay Axaddii sheegtay in mas'uuliyiinta Masar ay la dagaalanka argagixisada iyo maxkamadaha ay si caddaalad darro ah ay ugu bartilmaameedsanayaan wariyeyaasha, dadka u doodo xuquuqul insaanka iyo mucaaradka.
Shakhsiyaadka dhawaan xabsiga loo taxaabay waxaa kamid ah weriye online-ka wax ku qoro oo la yiraahdo Wael Cabbaas iyo nin ka shaqeeyo arrimaha xuquuqul Insaanka Cama Fatxy iyo xaaska madaxa guddiga xuquuqul insaanka Masar.